China ICE Yakakwira Kushanda Kwejecha Kuchenesa Sisitimu yeKutonhora Towers 'Kutenderera Kwemvura Kurapa Mugadziri uye Mutengesi | Yubing
Yakakwira Kubudirira Kwejecha Sefa
Iko kuvandudzwa kwepamusoro kushanda kwejecha mafirita kwakachinja kutonhorera kwemvura kusefa. Zvimiswa zvinomisikidzwa izvozvi zvinogona kuve nemutengo unobviswa zvakaringana ku1 / 2 micron ine otomatiki yekuwacha yekusefa Yechinyakare tekinoroji multimedia mafirita anongodzika kusvika kuma10 microns. Sezvo mazhinji anotonhorera emvura ari mukati me 1/2 kusvika ku5 micron saizi renji, mafirita emhando yepamusoro ari nani kwazvo pakubvisa zvinosvibisa izvi. Kuwedzera kusefa kusefa kunoreva zvakagadziriswa mhedzisiro ine diki firita ICE mafirita ekunyatsoshanda anoshandisa ultrafine jecha kuti ipe iyi inoshanda zvakanyanya kusefa. Iyo yekuyambuka-kuyerera chiito chemvura ichiyambuka pamusoro peyakanaka midhiya inodzivirira kukurumidza plugging nekusundira zvinosvibisa kuenda kunzvimbo yekuchengetera. Kwete kungoita kusefa kwekunatsiridza kunovandudza zvakanyanya, asi mafirita anoda kusvika kagumi kushomeka mvura yekudzosera kumashure.
Mutengo Unobudirira Kusvina
ICE mafirita ekunyatsoshanda anonyanya kushanda pakubvisa zvikamu zvakanyatsonaka zvinotonhodza shongwe kubva mumhepo. Uku kushanda kwakanyanya kunovandudzwa kunoita kuti mafirita aya akure zvishoma kana kusvika mashanu kudiki pane mafirita emultimedia apo uchipa mvura yakachena. Multimedia mafirita padivi-rwizi 5 kusvika 10% yeiyo recirculation chiyero, nepo yakakwira mafirita ehunyanzvi anongoda 1 kusvika 3%. Usatambise mari pamafirita mahombe asingashandi uchishandisa tekinoroji yekare.
Kubatsirwa kweMvura Yakachena Yakasvinwa
•Kuchenesa kupisa kupisa nzvimbo kunogonesa michina kuti ishande zvakaringana zvichikonzera kuderedzwa kwesimba remagetsi.
•Hupenyu hwemidziyo hunowedzerwa nekuda kwekudzikiswa kweiyo ngura mwero.
•Kubudirira kwehutachiona hwehutachiona hunovandudzwa zvichikonzera nzvimbo yebasa ine hutano.
•Kugadziriswa kwemidziyo uye nguva isina kuzadzikiswa yekuzorora yakaderedzwa nekuda kwekuchenesa sumps, kuzadza uye kupisa kupisa.
Zvadaro: ICE Maindasitiri Reverse Osmosis Sisitimu yeKutonhora Shongwe Yemvura Sisitimu
kutonhora shongwe yemvura kusefa
kutonhora shongwe mvura filtration maitiro
kusefa kwekutonhora shongwe kutenderera mvura
maindasitiri filtration system
maindasitiri jecha filtration system
jecha kusefa kwekutonhora shongwe
jecha filtration system